🥇 ▷ Joy-Con oo leh naqshad dabacsan? Nintendo wuu sameyn karaa ✅
Joy-Con oo leh naqshad dabacsan? Nintendo wuu sameyn karaa
In kasta oo Nintendo uu ku lug lahaa muranka ka dhashay mushkilad saameyn ku leh kontaroolada ‘SwitchJoy-Con’, waxaa la ogyahay in shirkadda Japan ay had iyo jeer ku jirto howlo joogto ah oo ay ku horumarineyso oo ay dhawaan shaaca ka qaaday macluumaad muujinaya inay jirto daneyn dib-u-habeyn ku sameynta kontaroolada ah of console hybrid ah, oo yeelan kara xoogaa xoogaa dabacsanaan ah.
Sida lagu sheegay warbixin Nintendo EveruthingNintendo wuxuu dhowaan ka diiwaangeliyay patent Japan isagoo muujinaya waxa noqon kara nooca xiga ee Joy-Con, kaas oo lahaan doona isbeddel xiiso leh oo ku saabsan booska suulka si loo xakameeyo xakamaynta. Marka loo eego sawirada uu soo bandhigay muhiimadaan, Nintendo wuxuu baarayaa suurtagalnimada soo saarida nooc cusub oo ah Joy-Con iyada oo intaa ku dareysa in dusha sare ee labada koontaroolo ay yihiin kuwo dabacsan si ay u bixiyaan meel raaxo badan oo ku dhow ciyaarta wixii la soo maray. oo leh kontorool guud.
Sida aad ku arki karto sawirada soo socda, in kabadan farsamo u saamaxaya dhaqdhaqaaqa kore ee Joy-Con, waxay umuuqataa in khiyaamadu ay ku jiri doonto waxyaabaha loo isticmaalay qeybtaas gaarka ah, maxaa yeelay waxay lahaan doontaa dabacsanaan iyo, laga yaabee , xoogaa iska caabin ah si ay ula qabsadaan rabitaanka ka dhigaya ciyaaryahanka inuu dareemo raaxo.
Maxaad u aragtaa suurtagalnimadaasi?
Noogu sheeg faallooyinka oo nagu soo raac LEVEL UP.